अक्षय कुमारको फिल्ममा सञ्जय दत्त भिलेन – Khabar Silo
अक्षय कुमारको फिल्ममा सञ्जय दत्त भिलेन
एजेन्सी– बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारसँग यतिबेला फिल्मको लाइन नै लागेको छ। केही दिनअघि आफ्नो जन्मदिनको मौका पारेर अक्षयले ऐतिहासिक ड्रामा ‘पृथ्वीराज’ को घोषणा गरे। यो फिल्ममा उनी हिन्दु सम्राट पृथ्वीराज चौहानको भूमिकामा देखिनेछन्।
यशराज ब्यानरले निर्माण गर्ने फिल्म पृथ्वीराजको निर्देशन चन्द्रप्रकाश द्विवेदीले गर्दैछन्। फिल्मका कलाकारको नाम घोषणा हुँदा निर्माण पक्षले सञ्जय दत्तको नाम सार्वजनिक गरेको थिएन। तर, अहिले आएर यो पृथ्वीराजमा सञ्जयले खलनायकको भूमिका निर्वाह गर्ने पक्का भएको बताइएको छ।
अक्षयसँगै सञ्जयको भूमिका पनि उत्तिकै सशक्त हुने निर्माण पक्षले बताएको छ। सञ्जयले पनि यो समाचारको पुष्टि गर्दै आफू फिल्म पृथ्वीराजमा अनुबन्ध भएको बताएका छन्।सञ्जयले आउँदै गरेको फिल्म ‘प्रस्थानम’ को प्रमोसनका क्रममा आफू पृथ्वीराजमा अनुबन्ध भएको बताए पनि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेबारेमा भने केही खुलाएका छैनन्।फिल्म पृथ्वीराजबाट मानुषी छिल्लरले बलिउडमा डेब्यु गर्ने बताइएको छ।
बलिउडदेखि हलिउडसम्म आफ्नो पहिचान बनाउन सफल अभिनेत्री प्रियंका चोपडा तथा उनका श्रीमान् निक जोनसले वैवाहिक जीवन प्रारम्भ गरेको आगामी डिसेम्बर महिनामा एक वर्ष पुग्दैछ । उनीहरुले विवाह गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रियंकाको गर्भवती बन्ने बारेमा विभिन्न जिज्ञासाहरु राख्न थालिएका छन् । त्यसरी जिज्ञासाहरु उठ्न थालेपछि प्रियंकाले पनि आफू गर्भवती हुने बारेमा खुलेर आफ्नो धारणा […]
मुम्बई : ‘डिजाइन पर्सन अफ दी इयर २०१९’को अवार्ड जितेपछि बलिउड अभिनेता शाहरुख खानले पत्नी गौरी खानलाई बधाई दिएका छन्। गौरीले बी डब्लू फ्युचर अफ डिजाइन एन्ड समिट अवार्डको दोस्रो संस्करणमा ‘डिजाइन पर्सन अफ दी इयर’ भएकी हुन्। यसबारे शाहरूखले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘भनाइ छ, लुगाले मान्छे बनाउँदैन, मान्छेले लुगा बनाउँछ। तर सत्य के […]
प्रेम त सबैले गर्छन्, तर साँचो प्रेम गर्न यी उदाहरणीय ६ जोडीबाट सिक्नुहोस् !
एजेन्सी : प्रेम त सबैले गर्छन, तर केबल केही मान्छेले मात्र साँचो प्रेमको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्दछन। आज हामी तपाईलाई बलिउडको चर्चित जोडीहरुको बारेमा बताउन गईरहेका छौं, जसबाट यो जान्न सकिन्छ कि साँचो प्रेम के हो ? शाहरुख खान(Shahrukh Khan) – गौरी खान(Gauri Khan) : शाहरुख खान र गौरीको वैवाहिक जीवनको यात्रा ३० वर्ष पूरा […]